सुपरसिक्स क्रिकेटको उपाधि टिम कर्पोरेटलाई – Nepal Multipurpose Co-operative Society Ltd.
Home » Activities » सुपरसिक्स क्रिकेटको उपाधि टिम कर्पोरेटलाई
काँकरभिट्टा । एनएमसी सुपरसिक्स क्रिकेट प्रतियोगिता २०७७ को उपाधि संस्थाको बैंकिङ प्रधान कार्यालय र कर्पाेरेट कार्यालयको संयुक्त टोलीले जितेको छ । ६४ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसर पारेर नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. (एनएमसी) अन्तर्गतको विषयगत उपसमिति एनएमसी खेलकुद उपसमितिको आयोजनामा चैत २० गते शुव्रmबार काँकरभिट्टा खेल मैदानमा सम्पन्न प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा मेचीनगर क्षेत्रलाई पराजित गर्दै कर्पाेरेट कार्यालयले उपाधि जितेको हो ।
विगत ८ वर्षदेखि अन्तर सहकारी सुपरसिक्स क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको संस्थाले यसपटक भने भिन्न शैलीमा प्रतियोगिताको आयोजना गरेको थियो । यसपटक प्रतियोगितामा संस्थाका ६ वटा बैंकिङ क्षेत्रहरू मेचीनगर, बिर्तामोड, भद्रपुर, कनकाई, सुरुंगा र शिवसताक्षीका साथै संस्थाको सहकारी पसल व्यवसाय र डेरी, कृषि फर्म र चिया व्यवसायको संयुक्त टोली तथा कर्पाेरेट कार्यालय गरी जम्मा ९ वटा टोलीको आन्तरिक प्रतिष्पर्धा रहेको थियो ।
फाइनल खेलमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको कर्पाेरेट कार्यालयले निर्धारित ५ ओभरमा ६० रन जोड्न सफल भएको थियो । ६१ रनको लक्ष्य लिएर मैदानमा ओर्लिएको मेचीनगर क्षेत्रले ५ ओभरको समाप्तिमा ५६ रन मात्र बनाउँदै ४ रनले नतिजा सुम्पन बाध्य भयो । फाइनल खेलमा अलराउन्डर प्रदर्शन गरेका कर्पाेरेटका नारायण तिवारी म्यान अफ् दि म्याच घोषणा भए । प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी मेचीनगर क्षेत्रका उमेशचन्द्र श्रेष्ठ घोषित हुँदा मेचीनगरकै भानुभक्त पोखरेल उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बिर्तामोडका रुपनारायण ओली उत्कृष्ट बलर हुन सफल भए ।
प्रतियोगिताको उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष ललितबहादुर तामाङले एनएमसी सहकारी अभियान सिक्नेका लागि अवलोकन गन्तव्य भएको आफूले बुझेको बताए । संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले बलिङ र वडाध्यक्ष तामाङले ब्याटिङ गरेर प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका थिए । कार्यव्रmममा सञ्चालक समिति सदस्य ठाकुरप्रसाद सिवाकोटी, सहकारी पसल व्यवसाय उपसमिति सदस्य खगेन्द्र ओझा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उप्रेती लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
समापन कार्यव्रmममा विजेता, उपविजेता तथा उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई प्रमुख अतिथि, संस्थाका अध्यक्ष लगायतले ट्रफी, मेडलसहित सम्मान गरेका थिए । एनएमसी खेलकुद उपसमिति संयोजक हरिप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यव्रmमको सञ्चालन सामुदायिक विभाग प्रमुख हिरन कट्टेलले गरेकी थिइन् ।
previous post: ४२ स्थानमा एकैसमयमा दीप प्रज्ज्वलन गर्दै एनएमसीको वार्षिकोत्सव
next post: एनएमसीद्वारा सशस्त्र प्रहरी पोष्टलाई ट्याङ्की सहयोग